हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक उपलब्धि—२ - Karobar National Economic Daily
हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक उपलब्धि—२
query_builderSeptember 22, 2017 8:30 AM supervisor_account डा. राशरण महत visibility738
वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघिसम्म पनि नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर थियो । विस्तारित आर्थिक नीतिका कारण अधिक तरलता, असन्तुलित व्यापार, उच्च मुद्रास्फीतिका कारण अर्थतन्त्र अस्थिर थियो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण नगरिएको भए हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि यतिका उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने थिएनन् ।
कतिपयले यो वृद्धि स्वाभाविक रूपमा पनि हुन सक्ने थियो भनी बेलाबखत ईष्र्यालु टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ । उदार आर्थिक अवधारणाअनुरूप अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण नगरिएको भए अथवा त्यस बेलाको जर्जर अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार नगरिएको भए यी उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । त्यसैले यसको पूरापुर जस तत्कालीन कांग्रेस सरकारलाई जान्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको जननिर्वाचित सरकारले उच्च आत्मविश्वास, दीर्घकालिन सोच, सुस्पष्ट दृष्टिकोण र जोखिमका साथ अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक सुधार गरेको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्वमा मलगायत योजना आयोगको टिम, तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्रीको हैसियतले महेश आचार्य तथा अन्य कर्मचारी साथीहरूको एउटा सशक्त टिमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने काममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थियौं । सार्वजनिक खपतका लागि जेसुकै कुरा बोले पनि लेखे पनि एमालेलगायत अन्य दलहरूले समेत यस नीतिलाई बदल्न सकेनन् ।
सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि
उदार र खुला आर्थिक अवधारणामा आधारित यस नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र आमूल सुधार गर्ने काम आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा भयो । आठौं योजनामा पिछडिएको वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने गरी कुल सरकारी खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक क्षेत्रमा व्यवस्था गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी सरकारको लगानी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको थियो । यो सुरुवातलाई पछिल्ला वर्षहरूमा अन्य सरकारहरूले पनि निरन्तरता दिएकाले आज यी उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेका हुन् । सामाजिक क्षेत्रको विकासमा यो एउटा ठूलो फड्को नै मान्नुपर्छ ।
आठौं योजनामा सामाजिक क्षेत्रमा ३१.५ प्रतिशत, कृषि, सिँचाइ र वनमा २५.७ प्रतिशत, विद्युत्मा २०.९ प्रतिशत, यातायात र सञ्चारमा १७.७ प्रतिशत, उद्योग र खानीमा २ प्रतिशत र व्यापार तथा पर्यटनमा १.३ प्रतिशत लगानीको व्यवस्था गरिएको थियो । सातौं योजनाको तुलनामा विशेष गरी सामाजिक सेवा, यातायात र सञ्चार तथा विद्युत्मा उल्लेखनीय रूपमा लगानी वृद्धि गरिएको थियो । उदार आर्थिक नीतिअनुरुप निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिन उद्योग क्षेत्रमा कम सरकारी लगानीको व्यवस्था गरिएको स्पष्टै छ ।
त्यसबखत आर्थिक विकासको एउटा अभियान नै चलाइयो । यस अभियानअन्तर्गत सरकारी माात्र नभई गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय तहसमेतको साधन, स्रोत, सीप, क्षमता, सिर्जनशीलता सबैलाई सदुपयोग गर्ने नीति लिइयो ।
उद्योग व्यापार क्षेत्रमा सुधार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरियो । निजी क्षेत्रले खुला र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न उद्योग–व्यवसायका हरेक क्षेत्रमा लाइसेन्सराजको अन्त्य गरियो । दोहोरो मुद्रा विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी चालू खातामा विदेशी मुद्रालाई परिवत्र्यता गरियो ।
राज्यको एकाधिकार भएका कतिपय आर्थिक गतिविधिमा विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरियो । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजी बजार, सहकारी क्षेत्र, कर राजस्व, ऊर्जा जलविद्युत्लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला बजारमुखी आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइयो ।
दोहोरो मुद्रा विनिमय प्रणाली हटाइयो । साहसिक निर्णय गरी व्यापक विरोधका बाबजुद वैज्ञानिक कर प्रणालीका रूपमा भ्याट लागू गरियो भने आयकर ऐनमा अनुकूल संशोधन गरियो । पुँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । नीतिलाई सहयोग गर्ने अनुकूलका ऐन–नियमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । नीतिगत परिवर्तनको परिणामस्वरूप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी उल्लेख्य मात्रामा आकर्षित हुन सक्यो । सन ९० को दशकमा अन्य सार्क मुलुकहरूको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो ।
उद्योगमा लगानी बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म योगदान हुन थालेको थियो भने हाम्रो निर्यातले ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयात धान्न सक्ने क्षमता बनेको थियो । तर, त्यसपछि त्रिशंकु संसद्, अल्पमतको सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, कतिपय दलबीच आर्थिक नीतिमा देखिएको अस्पष्टता र हिंसात्मक द्वन्द्वले उग्र रूप लिन थालेपछि आर्थिक वृद्धिदरले पक्डिएको यो गति रोकियो ।
आर्थिक विकासको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन सकेन । तथापि वि.सं. २०४८ पछि राखिएको आर्थिक सुधारको यो मजबुत जग हल्लाउन कठिन भयो । सार्वजनिक खपतका लागि जस्तोसुकै भाषणबाजी र दस्तावेजका नारामा जेसुकै कुरा लेखिए पनि सत्तामा गएपछि ढिलोचाँडो सबै दलले यस नीतिलाई अनुसरण गरेको देखियो ।
वि.सं. २०५२ पछि राजनीति अस्थिर बन्यो । राजनीतिक दलको मुख्य काम नै सरकार परिवर्तन बन्न गयो । यसले प्रशासनयन्त्रमा अस्थिरता ल्यायो र राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर हुन थाले । आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन सकेन । आर्थिक सुधारको सुरुका वर्षहरूमा हासिल उपलब्धिहरूले निरन्तरता पाउन सकेन । बा¥हवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई अझ नराम्रो चोट पु¥यायो ।
०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजनीतिक समस्या किनारा लागे पनि राजनीतिक अस्थिरता नेपालको जीवनशैली नै बन्न थालिसकेको छ । अहिले पनि वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भैरहेको अवस्था छ । ०६२÷६३ पछिको यस अवधिमा करिब दसवटा सरकार भइसकेका छन् । अहिलेको अझ ठूलो समस्या भनेको राजनीतिक तहमा होस् अथवा कर्मचारी प्रशासनमा, नेतृत्वको कमजोरी देखिएको छ ।
यसले गर्दा सुशासनको अवस्था नाजुक बन्दै गयो । दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएको र मुलुकका लागि जस्तोसुकै कठोर निर्णय लिन सक्ने नेतृत्वको सर्वथा अभाव महसुस गरिएको छ । भएकाहरूमा पनि सस्तो र क्षणिक लोकप्रियतामा रमाउने तथा दलगत स्वार्थमा रमाउने अत्यन्तै खराब र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखिएको छ । यसमाथि पनि हामीले यस्तो संविधान बनायौं कि यसअन्तर्गत कुनै राजनीतिक दलको एकल बहुमत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छैन । राजनीतिक दलहरूमा संयुक्त सरकारको संस्कार नहुने हो भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले अब निजी तथा पार्टीगत हितलाई भन्दा देश र जनताको हितमा काम गर्नैपर्छ । योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई हरेक नेतृत्वतहमा स्थापित गर्नैपर्छ । आगामी दिनमा सस्तो राजनीतिक प्रचारबाजीभन्दा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।
आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि बढाएर लैजान नसक्ने राजनीतिक दलहरूको भविष्य छैन । जनता र राष्ट्रको अहिलेको माग पनि यही रहेको छ । मुलुक र जनताको बृहत्तर हितका लागि साहसिक र कठोर निर्णय गर्नैपर्छ । सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले पनि यस्तो संस्कारलाई बढावा दिन जनमत निर्माणको अभियान चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको कठिन अवस्थामा पनि जेजस्ता उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेका छन्, ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अब आर्थिक विकासको अर्को अभियान चलाउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यसका लागि आर्थिक एजेन्डालाई अग्रभागमा राख्नुपर्ने र उच्च महŒवका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने समयको माग बन्न पुगेको छ । यही नीतिलाई थप सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन ।
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा भएका यी उपलब्धिसँगै जनतामा गुनासो के बढ्दै गएको छ भने यिनको गुणस्तरलाई उच्च बनाउने र सेवालाई प्रभावकारी, सस्तो र विश्वसनीय बनाउने चुनौती छ । उद्योग, बैंक, सेवा, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई क्षेत्रका यी उपलब्धिहरूको जगेर्ना, थप सुधार र जनोपयोगी बनाई जनगुनासो न्यून गर्दै लैजानुपर्ने खाँचो छ । (समाप्त)
(पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतसँगको कुराकानीमा आधारित)
अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन डा. राशरण महत हिंसात्मक द्वन्द्व,